के २७ लाख लाग्ला यो स्वास्थ्य चौकी लाई ? २७ लाखमा निर्माण भएको स्वास्थ्य चौकी
खोटाङ जिल्ला साकेला गाउँपालिका ४ मा २७ लाख रुपैयामा निर्माण भएको स्वास्थ्य चौकी हो यो । तस्विर देख्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ । अहिले सबै पालिकामा निर्माण गर्न लागिएका सबै स्वास्थ्य चौकी यस्तै हुन् सरकार ?
यहाँ काठ, ढुंगा–मोटो, जस्ता, केही मात्रामा सिमेण्ट र बालुवा बाहेक अरु केही प्रयोग भएको छैन । कसको दृष्टीले यति खर्च लाग्यो होला भन्छ ? बाँकी विवरण खोजी हुँदैछ । खर्च जग्गा बाहेक हो नी, निर्माण गर्न मात्र ।
नियालेर हेर्नुहोला । अझै अहिले त सामाजिक संजाल फेसबुक मा पनि यो भवन को फोटो राख्दै यो घर २७ लाख मा होईन म ३ लाख मा बनाई दिन्छु भन्दै पोस्ट आएको पनि हामिले देखियो । लाग्छ यो घर होस या स्वास्थ चौकी होस तर यो बनाउदा २७ लाख चै नलाग्ला ।
यो घर बनाउदा करिबन अहिले को महँगी मा पनि धेरै मा धेरै लागे ५ देखि ६ लाख मा यो घ्र सम्पन्न होला । तँपाईहरु को मनमा जे लाग्छ २–४ शब्द प्रतिक्रिया जनाउँनुहोला । तल पेज को कमेन्ट बक्स मा कमेन्ट गर्नुहोला ।